दर्ता भएन जसपाको संविधान संशोधन प्रस्ताव, के छ संशोधन प्रस्तावमा? « Kakharaa
दर्ता भएन जसपाको संविधान संशोधन प्रस्ताव, के छ संशोधन प्रस्तावमा?
१७ जेठ, काठमाडौं । संसद सचिवालयले जनता समाजवादी पार्टीले दिएको संविधान संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्न आनाकानी गर्दै पुनः आइतबार आउन भन्दै फर्काइदिएको छ ।
शुक्रबार संशोधन प्रस्ताव लिएर जसपाका नेताहरु संसद सचिलाय सिंहदरबार पुगे पनि महासचिव भरतराज गौतमले दर्ता नगरी फिर्ता गरिदिएका हुन् ।
गौतमले सभामुख अग्निसापकोटासँग पनि छलफल गर्नुपर्ने भएकाले आतबार पुनः आउनुभएर आफूलाई फर्काएको जसपाका सांसद लक्ष्मणलाल कार्णले जानकारी दिए । उनले देश सञ्चारसँग भने, ‘महासचिव ज्यूले सभामुखसँग छलफल गर्छु, आइतबार आउनु भन्नुभएको छ। हामी फेरि जान्छौं ।’
प्रतिनिधिसभाको विधेयक शाखाका प्रमुख नारायणप्रसाद ढकालले पनि आइतबार आउने गर्न विधेयक दर्ता नगरी पठाइएको जानकारी दिए ।
२०७२ असोजमा संविधान घोषणा हुँदैदेखि आफ्ना माग समेटेर संविधान संशोधन हुनुपर्ने माग गर्दै आएको केन्द्रित दलले सरकारलाई आफ्ना माग समेटेर संशोधन प्रस्ताव ल्याउन आग्रह गरे पनि अस्वीकार गरेपछि आफैं निजी विधेयकका रुपमा ल्याएका हुन् ।
सांसद कर्णले आफ्नो एकल प्रस्तावमा संशोधन विधेयक तयार भएको र आइतबार केही सांसद थपिन सक्ने जानकारी दिए ।
सांसद कर्णका अनुसार २०७३ साल चैत २९ गते तत्कालीन शेरबहादुर देउवा नेतृत्वमा दर्ता गरेको संशोधन प्रस्तावलाई आफूले हुबहु अघि बढाउन चाहेको जानकारी दिए। त्यस बेला तत्कालीन विपक्षी एमालले विपक्षमा मतदान गरेपछि उक्त प्रस्ताव अस्वीकृत भएको थियो ।
कर्णले भने, ‘कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले ल्याएको संशोधन प्रस्तावलाई नै मैंले ल्याएको हुँ। त्यति बेला व्यवस्थापिक संसद थियो, अहिले संघीय संसद छ फरक त्यति मात्र हो ।’
२०७३ चैत २९ गते दर्ता भएको संशोधन प्रस्ताव सर्वसाधरणको जानकारीका लागि संसद सचिवालले २०७४ साल वैशाख ११ गते राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरेको थियो ।